‘मेरो कार्यकालमा उर्लावारीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनको अनुभूति हुनेछ’ - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ पालिका स्वास्थ्य ∕ ‘मेरो कार्यकालमा उर्लावारीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनको अनुभूति हुनेछ’
‘मेरो कार्यकालमा उर्लावारीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनको अनुभूति हुनेछ’
हेल्थ आवाज आईतबार, २०७८ जेठ १६ गते, १०:३६ मा प्रकाशित
मोरङको विराटनगरपछि दोस्रो ठूलो सहर हो–उर्लावारी । संघीय नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत विकासका कामहरु स्थानीय तहले गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्योजन गरिएको छ । कोभिड–१९ दोस्रो लहरबाट उर्लाबारी नगरपालिका पनि उच्च जोखिममा छ । संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिइरहेको छ । कोभिड–१९ भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा उर्लाबारी नगरपालिका प्रमुख खड्गबहादुर फागो सक्रिय छन् । फागोसँग हेल्थ आवाजको लागि प्रदेश १ का संयोजक अनिल श्रेष्ठले उनी नेतृत्वमा आएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कामहरु, संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणदेखि आगामी स्वास्थ्य योजनालगायतका यावत विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी :
उर्लावारी नगरपालिकाको नेतृत्वमा आएपछि स्वास्थ्य तर्फ के—के काम भए ?
उर्लावारीका धेरै वडाहरूमा उपस्वास्थ्य चौकीको स्थापना भएर स्वास्थ्य सेवा संचालन भइरहेको छ । उर्लावारी–३ मंगलबारेमा मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर रहेको छ । जुन ५० शैय्याको अस्पताल हो । यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकहरूद्धारा बिरामीको उपचार हुने गरेको छ । यस्तै, ८ नम्बर वडामा स्वास्थ्य चौकी रहेको थियो । अहिले हामीले कोभिड–१९ संक्रमतिको उपचार गर्ने ११ शैय्याको आइसोलन सेन्टर चलाएका छौं । यहाँ करारमा नियुक्त गरेको दुई जना मेडिकल अधिकृत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले उपचार गर्दछन् । हामीले सर्वसाधरणको स्वास्थ्यमा पहुँच होस्, स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयनमा लगेका छौं । नगरभित्रका आर्थिक अवस्था नाजुक भएका, विपन्न परिवारको सदस्यको निःशुल्क जीवन विमा गरिदिने गरेको छौं । त्यसबाहेक प्रत्येक वडामा आधरभूत स्वास्थ्य केन्द्र गरेर ७ वटा रहेको छ । यसबाट पनि स्वास्थ्य उपचार हुने गरेको छ । हामीले कार्यकालको सुरुवातदेखि नै ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छौं ।
कोभिड–१९ को अवस्था उर्लावारीमा कस्तो छ ?
पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरमा कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम उच्च देखिएको छ । अहिलेसम्म २ सय ५६ जना संक्रमित पुगेका छन् । १७ जनाको कोभिड–१९ संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । १ सय ७ जना संक्रमणमुक्त भएर ठिक भएका छन् । पहिलो लहरमा उर्लाबारीमा संक्रमणले खासै प्रभाव नपरेपनि दोस्रो लहरको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रदेश, संघीय सरकारसँग समन्वय र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य संक्रमण रोक्न र नगरवासीको ज्यान जोगाउन सक्रिय भएर फिल्डमा खटेर लागि परेको छु ।
उर्लावारी नगरपालिकाले कोभिड—१९ नियन्त्रणमा कसरी काम गरिरहेको छ ?
कोभिड—१९ को पहिचान भएपछि गाह्रो हुने बिरामीको लागि उर्लावारी ८ राजघाट ११ शैय्याको आइसोलेसन खेलेका छौं । राजघाटमा रहेको आइसोलेसन अक्सिजनसहितको हो । जहाँ दुई जना एमबीबीए डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरुको टिम छ । उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नमा संक्रमितको उपचार हुने गरेको छ । निकै गम्भीर भएका बिरामीलाई विराटनगर र अन्य ठूला हस्पिटहरुमा रेफर गर्ने गरेका छौं । त्यसको लागि नगरपालिकाले स्टेनवाइज एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै उर्लाबारी– ३ मंगलबारेमा रहेको मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा पनि १२ शैय्याको कोभिड अस्पताल संचालनमा आएको छ । उर्लाबारीमा संक्रमण बढ्न थालेपछि निजीस्तरबाट पनि कोभिड अस्पताल संचालनमा आएको छ ।
उर्लावारीस्थित गोदावरी हस्पिटलले पनि १० शैय्याको कोभिड अस्पताल संचालनमा ल्याएको छ । नगरपालिकाले बनाएको आइसोलेसन र होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई गाह्रो भएर थप उपचारको लागि ठूला हस्पिटल लैजादा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुचारू गरेको छ । होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले दिने गरेका छौं । संक्रमितमा सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याङ टे«सिङमार्फत परीक्षण गरिनेछ भने एन्टिजेन परीक्षणलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आवश्यक पर्ने औषधी पनि हामीले घरमा पु¥याइदिने गरेका छौं । दीर्घरोगका समस्या भएका बिरामी अहिलेको यो संक्रमणमा फार्मेसीसम्म पुग्ने अवस्था छैन । हामी त्यस्ता विरामीलाई घरमा औषधी पु¥याउने संयन्त्रको विकास गरेको छु ।
स्थानीय तहले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी अभाव खेपिरहेको छ । उर्लावारी नगरपालिकाले जनशक्तिको कसरी व्यवस्थापन गरेको छ ?
नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट विज्ञापन गरेर मेडिकल अफिसरहरु ल्याएका छौं । स्टाफ नर्सहरू पनि छन् । हामीले उहाँहरूलाई करारमा नियुक्त गरिएको हो । जुन एउटा अवधिभरको लागि काम गर्नुहुन्छ । आवश्यकताअनुसार थप गर्ने हाम्रो लक्ष्य पनि रहेको छ । स्थानीय तहले चिकित्सक र स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव खेपिरहेका छन् । यसमा प्रदेश र संघीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
नगरपालिकाले स्वास्थ्य प्राथमिकताको कुन तहमा राखेर काम गर्दै आएको छ ?
स्थानीय तहको पूर्वाधारपछि दोस्रो प्राथमिकता स्वास्थ्य र शिक्षा हो । पूर्वाधारपछि हामीले दोस्रो प्राथामिकतामा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै दिएका छौ । अहिले प्राथमिकताको आधारमा नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम भैरहेको छ । उर्लावारीमा थप १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसलाई आगमी नीति तथा कार्यक्रममा योजना बनाएर बजेट पनि विनियोजन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
हाम्रो अपेक्षाअनुसार बजेटको पाटोमा खासै सहयोग भएको छैन । यद्यपि, हामीले योजना बनाइरहेका छौं । हरेक वडामा स्वास्थ्य पहुँचमा नागरिकलाई जोडन लागि परेका छौं । बजेटको हिसाबमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको पर्याप्त सहयोग भएको छैन । स्थानीय सरकारलाई प्रदेश एवं संघीय सरकारको सहयोग हुँदा परिणाम राम्रो आउने भएकोले हामीहरुले हरेक कार्यक्रममा सधैँ जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौं । कोभिड–१९ को सुरुमा नै प्रोटोकलमा नहुँदा पनि संघ र प्रदेशले गर्ने काम पनि गरिरहेका थियौं । कोभिड–१९ को पहिलो लहरको समयमा संघ र प्रदेश समन्वय गरि काम गरेको थियो । दोस्रो लहरमा अपेक्षा गरेजस्तो सहयोग पर्याप्त आएको छैन । नगरपालिकाले आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर संक्रमण रोक्न काम गर्दै आएको छ ।
नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दासम्म उर्लावारीको स्वास्थ्यलाई कहाँ पु¥याउने लक्ष्य छ ?
हिजोको अवस्थामा उर्लावारी वडाहरुमा उप—स्वास्थ्य चौकी समेत थिएन । हामी आएपछि आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल निर्माण कार्य भैरहेको छ । ज्येष्ठ नगारिकहरुको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमदेखि बिरामीको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने कार्यहरु भएको छ । हामी हुनसक्ने सबै आवश्यक कामहरु गरिरहेका छौं । हाम्रो डेढ वर्षको कार्यकालमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै नै परिवर्तन भएको अनुभूति हुनेछ । हामीले छोड्दै गर्दा स्वास्थ्यमा यहाँका नागरिकले पनि धेरै परिवर्तन भएको अनुभूति गर्ने विश्वास दिलाउछौँ ।